Cirrus Insight: Salesforce ary fampidirana Gmail | Martech Zone
Cirrus Insight: Salesforce ary fampidirana Gmail
Asabotsy, Aprily 5, 2014 Asabotsy, Aprily 5, 2014 Douglas Karr
mpiara-miasa Chris Theisen fefy Cirrus Insight mivoaka amin'ny Facebook ho toy ny tsy maintsy ananana raha mampiasa ny orinasanao Google Apps ho an'ny mailaka ary Salesforce toy ny CRM anao. Rehefa avy nijery ny horonan-tsary sy ny pikantsary dia hitako ny antony!
Ny mampiavaka ny fampidirana ny Gmail sy ny Salesforce dia misy:
Jereo ny fampahalalana momba ny varotra Contextual ao amin'ny Inbox-nao - rehefa manokatra mailaka ianao dia hahita famintinana snapshot an'ireo firaketana ny mpandefa ao amin'ny Salesforce, ao anatin'izany ny famintinana ireo Fahafahana misokatra sy mihidy.
Tehirizo ao amin'ny Salesforce ny mailaka sy ny tarehin-tsoratra - mampifandray mailaka ho azy ireo hifandray sy firaketana ny kaonty amin'ny fampiasana (ny bokotra Quick Add). Na ampiasao (ny bokotra Add to Salesforce) mba hamaritana tsara ny fomba itiavanao ny mailaka ao amin'ny Salesforce, na dia ny fampifandraisana mailaka amin'ny saha sy zavatra manokana aza. Azonao atao aza ny mitahiry fametahana miaraka amin'ireo mailakao ao anatin'izany ny Google Drive Docs. Ny Cirrus Insight dia hanara-maso sy hampiseho ireo mailaka nataonao tao amin'ny Salesforce.
Ampidino ny kalandrie Google & Salesforce anao - ny hetsika rehetra ataonao dia mifandrindra eo anelanelan'ny Salesforce sy Google, mifandraika amin'ny zava-misy amin'ny rakitsoratry ny mpanatrika ao Salesforce. Tsy hoe manana rakitsoratry ny fivorianao fotsiny ianao fa misy ifandraisany amin'ireo olona nasainao ho azy ireo koa.
Manampia mitarika sy fifandraisana amin'ny Salesforce - Cirrus Insight, miaraka amin'ny RingLead, dia mitondra fisamborana fifandraisana amin'ny mailaka mandeha ho azy ao amin'ny Gmail. Rehefa mamorona firaka na fifandraisana vaovao ianao ao amin'ny Cirrus Insight, dia hojeren'ny app ho azy ny sonia mailaka ary hongotany ny mombamomba ny fifandraisana mba hamenoana ny firaka na ny endrika fifandraisana.
Ampifanaraho amin'ny Google Apps ny contact Salesforce anao - ampifanaraho ny fifandraisana amin'ny Salesforce mankany amin'ny Google Contacts sy ireo fitaovanao finday. Ny mpampiasa dia afaka mamaritra vondrona mpifandray ao amin'ny Salesforce hampifanarahana amin'ny Google. Ireo fifandraisana voaarindra amin'ny Salesforce dia ho voarindra arak'ireo vondrona nofaritanao ary ho mora ny mifantina izay fifandraisana tianao ampidirina amina finday.
Mamorona & amboary ny firaketana ny Salesforce - mamorona firaketana vaovao ao amin'ny Salesforce rehefa miditra ao amin'ny boaty mailakao ianao. Salesforce dia vaovao hatrany ka tsy mila miahiahy momba ny fiverenana sy ny fanavaozana ny rakitsoratra ianao avy eo. Azonao atao ihany koa ny mitantana ny Salesforce hatrany amin'ny Gmail miaraka amin'ny fanitsiana an-tsoratra ny firaketana efa misy ..
Mamorona tranga ho an'ny Salesforce avy amin'ny Gmail - mamorona, manova, mitantana, manitatra, ary na dia manakatona tranga aza avy ao amin'ny Gmail.
Ampio Contact Google ao amin'ny Salesforce - fantaro raha ao amin'ny Salesforce ny Google Contacts anao ary mamorona firaketana Lead sy Contact vaovao avy amin'ny pejy Google Contacts anao.
Salesforce Tasks Integration - mamorona, manova, manendry, mitantana ary mamita asa nefa tsy mamela ny boaty.
Fampidirana Templates Salesforce miaraka amin'ny Gmail - midira amin'ny modely Salesforce anao, manambatra saha, manova ary mandefasa azy ireo avy hatrany amin'ny Gmail.
Buttons namboarina ao anatin'ny Gmail - fidirana ary alaivo ny bokotra Customforce tsy amelanao ny boaty. Miteraha tolo-kevitra sy antontan-taratasy ary manaova lalàna mifehy ny workflow avy amin'ny Gmail!
Fiantsoana fihaonambe maimaimpoana avy amin'ny Gmail - Ny Cirrus Insight, miaraka amin'ny UberConference, dia mitondra antso an-tsary sy maimaimpoana antso avy amin'ny Gmail. Manomboha antso ho an'ny kaonferansa ary hanampy ny fampahalalana rehetra i Cirrus Insight handraisana ilay antso. Ny sisa ataonao dia ny mamonjy!
Tags: cirrus fahitanaCRMGmailgoogle appsfampidiranasalesforce
SimpleCast: Sehatra fifandraisana amin'ny mpanjifa
Apr 8, 2014 amin'ny 9: 05 AM
Misaotra ny fihorakoroka Doug. Nampiasa Cirrus tao amin'ny FlexPAC izahay nandritra ny fotoana kelikely ary nanampy betsaka tamin'ny fananganana ny Salesforce izany. Tsy manana mpiasa miasa amin'ny haitao izahay ka izay fomba rehetra hanadio ny traikefa Salesforce sy ho mora tafiditra ao anatin'ny onjam-piasan'izy ireo mahazatra dia manampy anay. Satria tsy ao amin'ny fanontana Enterprise an'ny Salesforce izahay izay manana Cirrus (ampiarahina amin'ny Right On Interactive) dia namela anay hanao zavatra mahafinaritra ihany koa ao anaty izay tsy ho vitantsika raha tsy izany.